Ihu ihu ọkụ: ihe ọ bụ, ka esi kpụọ ya na njirimara ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Anyị maara na oke ikuku bụ nnukwu ikuku dị n'ime ebe enwere iru mmiri na ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche nke na-egosipụta ụdị ikuku anyị na-eme. Igwe ikuku ndị a nabatara njirimara nke mpaghara ebe ha guzobere ma dabere na ngagharị ha na-ewepụta mgbe e kere ha. Dabere na nkwụsi ike nke igwe ikuku anyị nwere ike ịchọta ụdị ihu dị iche iche. Taa, anyị ga-ekwu maka ya ọkpọiso na-ekpo ọkụ na njirimara ha.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere mmalite na nsonaazụ nke ihu ihu ọkụ, nke a bụ post gị.
1 Igwe ikuku na nkwụsi ike nke ikuku
2 Ihu ọkụ
3 Na-ekpo ọkụ n'ihu ihu igwe
Igwe ikuku na nkwụsi ike nke ikuku
Iji ghọta ihe ihu ihu na-ekpo ọkụ bụ, anyị ga-amata ọnọdụ ikuku na mmekọrịta gbasara ọrụ nke igwe mmadụ. Iguzosi ike nke igwe ikuku niile bụ ihe na - ekpebi ihu igwe nke na - eme na mpaghara ụfọdụ. Mgbe anyị nwere ikuku kwụsiri ike, anyị na-ekwu maka mpaghara ebe anaghị ekwe ka mmegharị kwụ ọtọ. N'ihi nke a, e nwere ike ịmepụta igwe ojii mmiri ozuzo. Mgbe enwere ọnọdụ ikuku nke ikuku, ọ kacha mma ikwu maka anticyclones. Ọ bụ ezie na ikuku kwụrụ ọtọ nwere ihu ọma dị mma.
N'aka nke ọzọ, mgbe ikuku na-ejighị n'aka, anyị na-ahụ na ọ na-emegharị mmegharị ihu ọma ma na-eji igwe ojii na-eme ka igwe ojii na-ezo. Ọnọdụ ndị a jikọtara ya na ndakpọ mmụọ ebe ọ bụ na ọdịda nke nrụgide nke ikuku na ịmepụta oke ifufe.
Ọ bụrụ na ikuku ikuku na-ekesa n'elu oyi nke dị jụụ, a na-ewere ya dị ka ikuku ikuku na-ekpo ọkụ. Ntughari gafee elu nke nwere ala dị ala ga-amalite jụụ akụkụ kachasị nso na ala. N'ụzọ dị otú a, dị ka ikuku n'elu amalite ajụ oyi na-aghọ denser na arọ. Site na ụdị njirimara a, a na-egbochi mmegharị ikuku kwụ ọtọ, si otú a na -emepụta ikuku ikuku dị jụụ. Ọnọdụ a kwụsiri ike maka ịnwe ifufe na-adịghị ike, ntụgharị ihu igwe kwụ ọtọ nke na-ebute mmụba nke uzuzu nke ihe mmetọ na-adị na akwa ala. Ọnọdụ a kwụsiri ike bụ nsogbu maka obodo ndị kachasị emetọ. Anyị na-ahụkwa ụfọdụ ihe isi ike maka ọhụụ zuru oke na igwe ojii ole na ole nwere mmepe kwụ ọtọ.
N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ikuku ikuku na-ekesa n’elu nke dị ọkụ karịa ka akpọrọ ya igwe ikuku oyi. Ka ọ na-agagharị n'elu, mmetụta ọzọ na nke ahụ anyị kọwara ga-eme. Ọ ga - amalite kpoo ọkụ na ntọala ya, ha ga - adịkwa ntakịrị, nke ga - akwado mmegharị vetikal. Nke a na - aghọ ikuku ikuku na - ejighị n'aka nke na - akpata mmụba nke ike nke ifufe, mmelite nke visibiliti, mana mmepe igwe ojii na ọdịda.
Dịka anyị hụwororịrị, a na-ahụ oke ikuku site n'inwe ọnọdụ yiri nke okpomọkụ na iru mmiri n'oge niile ya. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji kewaa igwe ikuku site na nkwụsịtụ. Dabere na njirimara nke oke ikuku, anyị nwere ike ịhụ nhazi nke ihu ọkụ, ihu oyi, ihu zoro ezo ma ọ bụ ihu ihu.
A na-etolite ihu na ọkụ mgbe oke ikuku dị ọkụ rutere ọzọ ikuku oyi. Ikuku na-ekpo ọkụ na-arị elu karịa ikuku ikuku na ọnọdụ okpomọkụ kachasị dị ala. A maara ikuku ikuku ikuku dị ala dị ka mpaghara oyi. Mgbe igwe ikuku jikọtara, a na-ebute odide na igwe ojii. Akụkụ bụ isi nke ihu na ọkụ bụ na ọ nwere obere mkpọda. Nke ahụ bụ ịsị, na-agakarị na nkezi ọsọ nke ihe dịka 30 km / h ma nwee igwe ojii nke dị ihe dịka kilomita asaa. Nke a putara na igwe ojii kachasi ike bu obere igwe ojii.
Igwe ojii na ọdịda na-etolite n'akụkụ ihu kọntaktị n'etiti igwe ikuku abụọ ahụ. N'etiti ọdịdị nke igwe ojii mbụ na mmalite nke ọdịda ahụ nwere ike ime n'etiti awa 24-48.
Na-ekpo ọkụ n'ihu ihu igwe
Ka anyị nyochaa ihe ihu igwe na-ewetara anyị ihu ọma. Ọnọdụ ikuku nke na-eme ka ihu na ọkụ na-amalite na ọdịdị nke igwe ojii dị elu. A maara igwe ojii ndị a dị elu site n'igwe ojii cirrus. Ha na-adịkarị ma ọ bụ dị nso n'uche 1000 kilomita ma ọ bụ karịa n'ihu nke ihu. Nrụgide nrụgide na-amalitekarị n'ihi ịrị elu ikuku ọkụ na iwepụ ikuku oyi.
Nke nta nke nta, anyị na-ahụ ka igwe si bụrụ igwe ojii ka ọ na-erute akụkụ kachasị mkpa nke eriri na-adịghị agbanwe agbanwe. Igwe ojii Cirrus ghọrọ na cirrostratus nke na-ebuwanye ibu iji mepụta altostratus. Dabere na enweghị nkwenye nke n'ihu, ọ nwere ike itinye ụfọdụ nsị n'oge e guzobere igwe ojii ndị a. Anyị na-ahụ na ụkpụrụ nrụgide na-aga n'ihu na-ada ada ma ikuku ikuku na-abawanye. Anyị maara na ikuku na-aga n'akụkụ nke mpaghara ndị ahụ ebe nrụgide pere mpe. Ya mere, ọ bụrụ na mgbada dị na elu ka ikuku na-ekpo ọkụ na-arị elu, ikuku ga-aga n'akụkụ ahụ.
N'ikpeazụ, nimbostratus na-apụta. Typesdị ígwé ojii ndị a dị n'otu ihu ma bụrụ ndị na-akwado usoro ikuku kachasị mkpa. Ifufe ruru ike ya kachasị na nrụgide ka na-ebelata. Igwe ojii dị ala na-abịarukwa, dị ka strata nke a na-akpụ site na ụba iru mmiri n'ihi mmiri ozuzo a na-emepụta. Offọdụ n’ime igwe ojii ndị a naanị bụ ndị na-ahụ maka izoro igwe ojii ndị ọzọ dị elu ma mee ka ikuku ụta dị n’ihu. Mgbe ụfọdụ, Igwe a nwere ike inye nsogbu ihu na ihu.
N'ihu na-aga n'ihu na-esighi ike ma na-ewetakarị mmiri ozuzo na-adịghị ike. Njirimara nke na-ebute ihu ma na-ekpo ọkụ bụ na, ọ bụ ezie na ha bụ oke mmiri ozuzo na-esighi ike, ha na-eme ihe na nnukwu ala na ogologo oge. Ndị a na-abụkarị oge oyi na ngwụsị ọdịda ma ọ bụ n’oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n’oge oyi. N'oge nke a, enwere ike iburu mmiri ozuzo n'ụdị snow ma gbanwee ka ọ bụrụ mmiri mmiri ma kwụsị na mmiri ozuzo.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihu ọkụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihu ọkụ
Ọwara Oké Osimiri Peshia